Horonantsary Momba Ny Fikomiana, Mamelona Ny Soatoavin’ny Fanoherana Ny Fasista Tany Montenegro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2018 7:23 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Italiano, Français, Español, ਪੰਜਾਬੀ, 繁體中文, English
Pikantsary avy amin'ilay horonantsary “Le combat de Mare Bogdanova.”
Hagagàna no voaloham-pihetsik'ilay zanakavavin'i Mare Lakovic raha vao nilazanay voalohany ny fiheveranay fa tianay hatao ivon'ny fanadihadiana momba ny 70 taonan'ny fanafahana nanoherana ny fasista sy ny fanafahana ny vehivavy tany Montenegro ny tantaran'itompokovavy reniny. ” Tena sangy ratsy izany” hoy izy tamiko sy ilay mpiara-manoratra amiko, Dragan Koprivica.
Fa niova hevitra i Vidosava Laković, 80 taona amin'izao fotoana izao. Dimy volana taorian'ilay fifandraisana voalohany tamin'ny antso an-tariby, sy vokatry ny ankamaroan'ny fahatsiarovana nozarainy taminay, amin'izao fotoana izao, dia efa fantatr'ireo montenegrin an'aliny ny tantaran'ny reniny rehefa nalefa tamin'ny onjampeon'ny fampielezampeon'ity firenena Balkàna ity tamin'ny 12 jolay 2018.
Mare Lakovic, teraka tamin'ny 1910 tao an-tànanan'i Cetinje any Monténégro dia niaina fiainana tsotra tao anaty fotoana tsy tsotra tahaka izany. Vao 30 taona izy, ary nanan-janaka efatra, dia efa nananon-tena rehefa nobodoin'ny tafika nazi ny firenena izay fantatra tamin'ny hoe Fanjakan'i Yogoslavia. Maty an'ady nandritra ny adin'ny Pljevlja tamin'ny desambra 1941 ny vadiny, Bogdan, mpiandany amin'ny kaominista. Tsy hoe vavolombelon'ny faharesena tamin'ny 1945 fotsiny i Mare fa mpandray anjara mavitrika tamin'ny ady anaty akatan'ireo mpiandany ihany koa.
Tamin'ny fikorontanana taorian'ny fisarahana mampivarahontsan'ity firenena kaominista ity tamin'ny Firaisana Sovietika tamin'ny 1948, dia saika naiditra tany amin'ny fonja politika any amin'ny nosy efitra iray any Adriatika izy. Ireo asany tsy misy fitsaharana ho an'ireo mpiandany nandritra ny ady, sy ny tambajotran'ny mpiara-dia aminy tany Balkàna no nanavotra azy, niaraka tamin'ny fanelanelànana nataon'ireo olona ambony tò teny amin'ny rafi-pitondràna yogoslavy. Ela velona izy mba hahita ny faharavan'i Yogoslavia, efa ho dimampolo taona taorian'ny nahazoan'ireo vehivavy ao amin'ny firenena ny zo hifidy, fa maty folo taona talohan'ny nahazoan'ny Montenegro – ny firenena nahaterahany – fahaleovantena tamin'ny 2006.
Tsy hoe olon-tsy fantatra i Mare Lakovic talohan'ny nanatontosanay ny horonantsarinay. Efa hitanay izy tao anatin'ny fitanisàna ireo olona marobe nasongadina ao amin'ilay tantara mahavariana antsoina hoe ” Le Rocher des aigles (Ny Vatolampin'ireo Voromahery ) – fiainan'ny fianakaviana montenegrine iray mandritra ny 100 taona” nosoratan'ilay montenegrin mpanentana sady mpanoratra, Nebojša Bato Tomašević. Maty tamin'ny herintaona teo amin'ny faha-87 taonany i Tomašević, sisam-paty tamin'ilay lozam-piaramanidina tany Munich tamin'ny 1958 izay nahafatesana olona 23, tao anatin'izany ireo mpikambana tamin'ny ekipa mpilalao baolina kitra britanika Manchester United. Fa “Le Rocher des aigles (Ny vatolampin'ireo Voromahery) dia mbola manamafy ny herimpon'ireo vehivavy tsotra any Balkàna tahaka ilay tanora malaza, Mare Lakovic, tamin'ny fotoan-tsarotra tsy hay visavisaina, sady nanampy tamin'ny famoronana ilay horonantsary izay nantsoinay hoe Le combat de Mare Bogdanova (Ny adin'i Mare Bogdanova- navoaka tamin'ny aterineto miaraka amin'ny fanazavàna amin'ny teny anglisy).
Eo am-pikarohana sy eo am-pizaràna ny tantaran'ny adin'ny olontsotra, dia tianay hampahatsiahivina amin'ny taranaka tanora kokoa ny fomba nahazoantsika ny fisitrahana ny zontsika amin'izao fotoana, ary koa samy manana ny sehatry ny adiny ny zo tsirairay, izay novidiana tamin'ny sorona marobe. Ny anaram-boninahitra dia taratry ny fomba amam-panao balkanika amin'ny fiantsoana ny vehivavy amin'ny anaram-badiny, nihanaka tamin'ny fotoana nahavelomany. Tamin'ny manodidina azy, Mare Bogdanova no nahafantarana an'i Mare Laković, izany hoe Mare-n'i Bogdan.
Ady amin'ny fasisma, sady ady amin'ny fanjakàn-dehilahy ihany koa
I Mare Lakovic izay ahariharin'ny asan'i Bato Tomašević dia modely matanjaka izay nahatonga ny fifandraisan'ny mpanoratra voalohany tamin'ny hetsika mpiandàny tany Cetinje, teo ambany fibodoan'ny Nazis tamin'ny 1941 ka hatramin'ny 1944. I Tomašević no nanankinan'i Mare ny ankamaroan'ny asany tao amin'ilay hetsika, izy no naniraka azy hanara-maso ny famonoana am-pahibemaso ireo mpikomy mpanohitra voasambotra. Tena zava-dehibe ho an'ny hetsika ny fahafantarana ny vaovao momba ny fihetsik'ireo voaheloka ho faty, mba hahafantarana raha toa ka nahazaka fampijaliana izy ireo. Nirahan'i Mare hanatitra sakafo ho an'ny mpigadra izy, hanaparitaka ny vaovao ambaran'ny fampielezampeo ary hampahafantatra azy ireo izay rehetra hitany any an-tanàna.
Ny tolon'ny mpiandàny no nanosika ireo vehivavy toa an'i Mare, izay tsy nahay namaky teny sy nanoratra tamin'ny fotoan'andro, ho amin'ny toeram-pibaikoana miafina. Navoitran'ny porofo fa tsy ao an-tokatrano ihany no ilàna azy, fa amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy sy ao amin'ny fireneny ihany koa, ka nitarika ny faharavana tsikelikelin'ny soatoavina nanerana an'i Yogoslavia.
Fa raha vehivavy tahaka an'i Mare no namorona ny any ambadiky ny fikomiana tamin'ny fanoherana ny fasista, dia nila mpisava làlana ihany koa ny hetsika.
Tsy mba tahaka an'i Mare i Bosa Vuković, ilay mpikambana amin'ny Vondron'ireo tanora sy vehivavy kaominista manohitra ny fasista, fa nilona tamin'ny haisoratra politika hatramin'ny hatanoràny. Nafana fo kokoa tamin'ny fanoherana ny fitehirizana ny fanjakàn-dehilahy, fomba nentim-paharazana, noho ny ankamaroan'ireo vehivavy tamin'ny fotoan'androny i Bosa Vuković. Taorian'ny fandraisany anjara tamin'ny hetsika fanoherana ny fasista, dia lasa lehiben'ny mpanoratra tao amin'ny gazetiboky atao hoe ” Nos femmes (ny vehivavintsika)” izy, izay hita fa tena ilaina amin'ny fanabeazana sy ny fanafahana ireo vehivavy any Montenegro. Mbola ivon-dresaka hafa amin'ny horonantsarinay ny hetsiky ny vehivavy tany Montenegro.
Aza avela ho faty ny fahatsiarovana, tsipaho ny fanavaozana ara-tantara
Ny fahanteran'ireo olona maro nahafantatra an'i Mare sy ny vadiny no iray amin'ireo antony goavana manosika anay mba hiaro ireo fahatsiarovana tamin'ity fotoanan'ny tolona lavareny ity. Nanam-bintana izahay fa afaka niresaka tamin'ireo olona loharanom-pahatsiarovana velona, izay nanampy anay hanangana ny sarin'ny fiainana izay tsy dia misy tahiry voarakitra firy any amin'ireo tahirintsoratry ny fanjakana.
Ny Radio -Televizionan'i Montenegro (RTCG), ny fampielezam-baovaom-panjakana ao amin'ny firenena no nanampy anay hampiditra ny sehatra ara-tantara ao amin'ilay asa soratra tamin'ny fanomezana ireo sary tsara dia tsara tamin'ny fotoan'andro, avy amin'ny horonantsary Lovćen, trano famokarana sarimihetsika tany Montenegro tamin'ny andron'ny kaominista. Ny famoahan'ny fahitalavi-panjakana ilay horonantsary dia mampiseho fa mbola miresaka amin'ny fiarahamonina ny ady fanoherana ny fasista. Ny 13 jolay, fetim-pirenena Montenegro dia tsy inona fa fahatsiarovana ny fitroarana fanoherana ny fasista tamin'io daty io tamin'ny 1941.
Fa amin'ny fandosirana amin'ny ampahany ny fandalàna vahoaka an'ny hery ankavanana hita any amin'ireo firenena balkàna hafa, dia tsy voaaro amin'ireo fironana mpitahiry ny nentim-paharazana manerana an'i Eoropa sy izao tontolo izao izay tsy niraharaha ny fototry ny hetsika fanoherana ny fasista i Montenegro. Rahonan'ireo tsindry ataon'ireo mpitahiry ny nentim-paharazana momba ny satoavina mahakasika ny fianakaviana sy ny ara-pivavahana ny famerana ny zon'ny tsirairay sy fanalàna ny ampahany betsaka tamin'ny fandrosoana notefen-dry Mare sy ireo hafa tao anaty trangan-javatra mafy dia mafy. Ny fanalànjaza sy ireo mety ho lalàna momba ny firaisan'ny olona mitovy fananahana dia tanjona roa goavana ho an'ireo vondrona ireo, nefa tsy misy ny manome antoka fa hijanona eo izany. Ny elanelana manasaraka ireo sokajy samihafa ao anatin'ny fiarahamonina dia mihazakazaka be ny fitomboany, ary atahorana ho adino ireo tena marefo.
Eo no idiran'ny fanabeazana. Tokony ho tsapan'ireo mamorona ny politikan'ny fampianarana ireo fivoarana ireo ary tokony ho malina kokoa ry zareo amin'ny fanabeazana ho olom-pirenena any an-tsekoly. Tsy ampy ny fanakianana fotsiny ireo tanora noho ny tsy fahafantarany ireo fotoana nolalovan'ny dadan'ny dadabeny, na tsy mahaliana azy . Andraikitry ny mpampianatra azy ireo ny mampahafantatra azy ireo fa tsy anganon'ny ntaolo ny soatoavin'ny fanoherana ny fasisma, ary tsy ianarana mba hanandratana ny lasa fotsiny io tantara io fa mba hiarovana ny ho avy.
Novokarina niaraka tamin'ny fanohanan'ny Vondrona Eoropeana tamin'ny alàlan'ny Centre pour la transition démocratique (Foibe Ho amin'ny fiovàna demokratika – CDT), fikambanana iray tsy mitady tombony, ary niarahana niasa tamina'ny Media Solution ity horonantsary Le combat de Mare Bogdanova ity. Azo jerena amin'ny aterineto miaraka amin'ny fanazavana amin'ny teny anglisy ny horonantsary.